पुरुष कबड्डीमा नेपालसंग बंगलादेश पराजित | KhelkudNepal.com
अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रण पुरुष कबड्डी प्रतियोगितामा नेपालले विजयी सुरुआत गरेको छ । त्रिपुरेश्वरस्थित राखेप कभर्डहलमा बिहीबार नेपालले बंगलादेशलाई ३७–३५ अंकले पराजित गर्‍यो ।
नेपालका विजय चन्द उत्कृष्ट रेडर र बंगलादेशका तुहिन उत्कृष्ट डिफेन्डर चुनिए । नेपालले पहिलोपल्ट बंगलादेशलाई हराएको हो ।
अखिल नेपाल कबड्डी संघद्वारा आयोजित प्रतियोगितामा नेपाल, बंगलादेश र भारत गरी ३ राष्ट्र सहभागी छन् । राउन्ड रोबिन लिगमा सबैले सबैसँग खेल्नेछन् । त्यसमा शीर्ष दुई स्थान हात पार्ने टोलीबीच पुन: फाइनल हुनेछ । शुक्रबार भारत र बंगलादेश तथा नेपाल र भारतबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछन् । प्रतियोगिता शनिबारसम्म चल्नेछ ।
5 thoughts on “पुरुष कबड्डीमा नेपालसंग बंगलादेश पराजित”
Any ideas? Thank you! https://buszcentrum.com/priligy.htm
साफ यू-१८ फुटबल अन्तर्गत आज (शुक्रबार) नेपालले माल्दिभ्सको सामना गर्दैछ। खेल नेपाली समय अनुसार ३:४५ बजे हुनेछ। यसअघि नेपाल भुटानसंग एक गोलले पराजित भएको थियो । भुटानले प्रतियोगितामा लगातार दुई खेल जित्दै बलियो दाबेदारी प्रस्तुत गर्दा नेपाल भने पहिलो जितको खोजीमा हुनेछ । पाँच राष्ट्रको सभागिता रहेको प्रतियोगिता राउन्ड रोविनका […]
मिथुनले जिते रुस्लान गल्फ टुर्नामेन्टको उपाधि